I-China Ubhaka Abahlinzeki - Isitolo esidayisa yonke impahla & Thenga Oobhaka Besaphulelo - I-Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya >Imikhiqizo >Ojosaka
Solar panel ubhaka
(1) Ubhaka welanga unephaneli yelanga elingu-7-watt elingakhokhisa amabhethri e-lithium polymer angamanzi angama-10,000 mha. Iphaneli yelanga nayo iyasuswa, ngakho-ke ungayikhomba lapho ufuna khona, noma uyisuse lapho uhamba khona ebusuku. Okwenziwe ngenayiloni kwenza isikhwama sibe lula futhi singangeni manzi, okwenza lesi sikhwama esihle sangaphandle sokuzidela. (2) Ingaphakathi libuye ligcwele imisebenzi eminingi emihle. Uma ubheka ikhava yangaphakathi evikelayo ye-laptop yakho lapho usohambweni, noma mane ulayishe izithombe zekhamera. (3) Kunamaphakethe amancane wamagajethi, amabhethri nezinto ezixubile, kanye nangemuva kwephaneli lelanga lokugcina iPowerBank. Igumbi elikhulu lesikhwama livulekile futhi kunamaphakethe amaningi ngaphakathi, ngakho-ke amadokhumenti noma amamephu ngeke al......
Uma ufuna ubhaka wamathuluzi onikeza isikhala esiningi emagumbini nasemaphaketheni ukugcina izesekeli zakho namathuluzi ahlelekile, khona-ke ubhaka wethuluzi le-FOFRER nakanjani ubhakha wethuluzi ofanele. Uma uvame ukuhambisa amathuluzi, ukuba nojosaka wethuluzi akulula kuphela, kepha kubalulekile.
Ubhaka wesikhwama se-diaper
(1) Lesi sikhwama se-diaper sikhwama senziwe ngendwangu yendwangu eyinhlanganisela engu-290T. Ubuso bugqokiwe ngengubo yokuvimba amanzi. Inezakhiwo eziqinile ze-hydrophobic futhi ingavimbela ngempumelelo imvula ekungeniseni ngaphakathi kwesikhwama se-diaper ngesikhathi esifushane. Le ndwangu inezici ezifana nokumelana nokugqoka nokuzizwa okuhle kwesandla. (2) 230T indwangu ye-twill Oxford isetshenziswa ngaphakathi, enamandla amakhulu nokuqina. (3) Izikhwama ezisebenza ngaphakathi zangaphakathi, njengezikhwama zokugcina umchamo, izikhwama zokugcina impahla , izikhwama zokugcina amathoyizi, izikhwama zokugcina ubisi lwempuphu yobisi nezikhwama zokugcina ezishisayo. Ingaphandle lakhelwe ngezikhwama zokugcina izinto ezisebenzayo, njengezikhwama zokugcina izicubu, izikhwama zokugcina ama-paraso......
Isikhwama se-diaper ephathekayo
Izikhwama zokushintsha izingane
Ufuna ukwazi ukuthi usidinga ngempela yini isikhwama se-diaper? Uma kunjalo, yimuphi umsebenzi okufanele ngiwubheke? Izikhwama ze-diaper zezingane ziza ngezindlela nobukhulu obuhlukahlukene, kepha ukukhetha isikhwama se-diaper esihle kakhulu kungaholela ekuthandweni. Ngaphambi kokuthenga, sicela ubheke lezi zici ezilandelayo: · Usayizi: Okungenani, udinga isikhwama sengane esingagcina amanabukeni, osula kanye nebhodlela elilodwa noma amabili. Uma uzimisele ukulungiselela noma yini, lapho-ke uzodinga okuthile okukhulu ngokwanele ukushintsha izingubo, amathoyizi, ukudla okulula, amadlanzana, ama-pacifiers, ama-rattles kanye ne-sanitizer yezandla. Ezinye izikhwama zezingane zinamaphakethe akhethekile, njengamaphakethe okubamba omakhalekhukhwini noma amathebulethi, amapokhethi afakwe imigoqo u......
Ukuhamba ngezintaba ngokuvamile kudinga ubhaka wobuchwepheshe wokuhamba izintaba, ukuze ukwazi ukuphatha kalula amanzi, ukudla, ezinye izingubo nezinye izidingo. Njengoba ukwakheka, umthamo, ukulingana nokusebenza kojosaka bokuhamba izintaba kuyahluka kakhulu, kunzima ukuthola ukuthi yiliphi ubhaka elizothengwa. Ngakho-ke, senze lo mhlahlandlela wokuhamba ezintabeni ubhaka ukukusiza ukhethe ubhaka wokuhamba izintaba ofanele wena.